URURKA SOMALI FACE IYO JAAMACADDA MUQDISHO OO DEEQ GAARSIIYAY BARAKACAYAASHA BAY IYO BAKOOL |
URURKA SOMALI FACE IYO JAAMACADDA MUQDISHO OO DEEQ GAARSIIYAY BARAKACAYAASHA BAY IYO BAKOOL
Ururka SOMALI FACE iyo Jaamacadda Muqdisho waxay deeq raashin ah gaarsiiyeen laba boqol oo qoys oo ku bara kacay gobalada Bay iyo Bakool abaaraha daran ee dabadheeraaday awgood. Deeqda la gaarsiiyay ayaa isugu jirtay Sonkor, Bariis, caana booro, saliidda raashinka, timir iyo bacaha guryaha la saarto.
Qoysaska deeqda ka faaiidaystay ayaa boqol ka mid ahi ka soo barakaceen degaanno ka tirsan gobalka bakool halka boqolka kale ay ku bara kaceen gudaha gobalka Bay. waxay hadda ku sugunayihiin xarumo kumeelgaar ah ay ka samaysteen daafaha magaalada baydhabo ee casimadda gobalka Bay, ayaga oo rajaynaya in ay dib ugu laabtaan beerihii iyo dagaanadoodii marka uu roobku da’o insha Allah.
Shariif Adam Isxaq oo ka mid ah aqoonyahanada u taagan gurmadka barakacayaasha ayaa si wayn ugu mahad celiyay Jamacadda Muqdisho iyo SOMALI FACE isaga jamacadda muqdisho ku bogaadiyay sida bulshada somaliyeed ugala dagaalanato jahliga iyo adeega bulshada. shariifka ayaa yiri baahidu aad ayay u balaarantahay hoy biyo iyo caafimaadba, isaga oo ka mahad celiyay fuddaynta hawlaha gurmadka kala duwan ee degaanka ka socda.
Sh. Madkuus oo ah masuulka kaam barakacayaasha qaarkood lagu xanaaneeyo ayaa ka waramay ajarka iyo xasanaadka badan ee ay leedahay sadaqada iyo ugurmashada dadka dhibaataysan aduun iyo aakhiraba, wuxuu yiri waqti loo baahnaa ayaad timaadeen deeq wax ku ool ahna soo qaarsiiseen walaalihiina, sidaa darted kudayasho ayaad mudantihiin.
Adam Ahmed xuseen oo ku hadlay magaca jamacadda muqdisho iyo ururka Somali face ayaa yiri: waxaad caan ku tihiin barashada quraanka iyo cilmiga waxaaad tihiin dad wax soo saar leh daggana dhul hodon ku ah beero iyo xoolaba, ha la samro, waxaan idiin keenay waa martigalin iyo hadiyad ay soo dhiibeen walaihiin Somali face, ardayda iyo malimiinta jamacadda muqdisho, abaarta Alle hanaga dulqaado
bulshada soomaaliyeed waxaan kula talinaynaa in ay isugurmadana islana gurmadaan Alle na kaashadaan.
Gudoomiyaha dagmada Badhabo mudane Cadullahi Ali watiin, ayaa xafiiskiisa ku soo dhaweeyay gudiga gargaarka ee jamacadda Muqdisho ugana madceliyay jamacadda muqdishu iyo SOMALI FACE gurmanashada dadkooda somaliyeed ee ku tabaaloobay abaarha ka dhacay dalkeena meelkasta oo ka mid ah, gaar ahaan Dawladgobaleedka koonfurgalbeed isaga oo Alle ka baryay raxmad iyo roob barwaaqo leh.